थप २२४ जना संक्रमित - Pradesh Today थप २२४ जना संक्रमित - Pradesh Today
दाङ, १७ साउन । शुक्रबार दाङका दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाँकेको राजस्व कार्यालयमा कार्यरत घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १५ र वडा नं. १८ का भएका दुईजना कर्मचारीमा कोरोना देखिएको हो ।
देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको पिसीआर परिक्षणमा शुक्रवार थप २ सय २४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १९ हजार ७ सय ७१ पुगेको छ ।
शुक्रबारसम्म ५ हजार ३ सय १६ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै शुक्रबार १० हजार ७ सय ६८ जनाको पीसीआर विधिमार्फत कोरोना परीक्षण भएको छ । यो सँगै हालसम्म ३ लाख ७५ हजार ४ सय १६ जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ भने १२ हजार एक सय ११ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।
थप चारजनाको मृत्यु
यसैगरी शुक्रबार कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण थप चारजनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण पर्सा जिल्लाका तीनजना र ललितपुरका एकजनाको मृत्युभएको हो । पर्सामा दुईजनामा मृत्युपछि कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो भने कोरोना पुष्टि भएका एक भारतीय नागरिकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएका वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का ३५ वर्षीय युवा र ६५ वर्षीय वृद्धको पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको हो ।
३५ वर्षीय युवाको कोरोना अस्पताल गण्डकीमा उपचारका क्रममा र ६५ बर्षिय बृद्धको घरमै मृत्युभएको हो । मृतक भारतीय नागरिक जगदम्बा इन्टरप्राईजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५६ पुगेको छ ।